Janet Jackson နဲ့ Justin Timberlake ရဲ့ ၁၄နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Super Bowl Halftime Show ရာဇဝင်
On February 6, 2018 By fairy
King of Pop လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Michael Jackson ကိုတန်းပြီးမြင်မိကြသလို Queen of Pop ဆိုရင်တော့ သူ့ညီမဖြစ်တဲ့ Janet Jackson ကိုပဲညွှန်းဆိုကြရမှာပါ။ သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Hollywood Walk of Fame Star ပိုင်ရှင် Janet Jackson ဟာ လက်ရှိ pop star တွေဖြစ်ကြတဲ့ အဆိုတော် တော်တော်များများရဲ့ Pop Icon တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ Justin Timberlake တစ်ယောက် Janet Jackson နဲ့ တွဲပြီး Super Bowl မှာဖျော်ဖြေမယ်လို့ ပြောနေကြပေမယ့် အဲ့သတင်းတွေမမှန်ကန်ကြောင်း Janet Jackson ကသူ့ social media account တွေကနေ ငြင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲပြီးတဲ့နောက် ငြင်းဆိုချက်တွေတင်ထားခဲ့တဲ့ post တွေကို ပြန်ဖျက်သွားခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိနိုင်တော့မှာပါ။
အသက် ၅၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ရှိရင်းစွဲအသက်ထက်အများကြီး နုပျိုနေတဲ့ Janet Jackson တစ်ယောက်ကတော့ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေကျဖြစ်တဲ့ အမေရိကားရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး football championship ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Super Bowl ပွဲချိန်ရောက်တိုင်း ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေမလားလို့ admin တစ်ယောက်တွေးမိနေပါတယ်။
” ” အဲ့လိုဖြစ်စရာ ရာဇဝင်ကရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆိုမှ ခုတော့ အနာဟောင်းကိုလာဆွတဲ့ လူတွေကလဲရှိနေပြန်ပါရောလား? အဲ့ကောင် Justin Timberlake ပေါ့ နှစ်တွေအဲ့လောက်ကြာအောင် ပြည်ဖုံးကားချပြီး အကုန်မေ့ထားပါတယ်ဆိုမှ ပြန်ပြီးလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နေတာ…..
မပြောချင်ပေမယ့် ပြောရဦးမှာပေါ့လေ.. ကိုယ်မပြောရင်လဲ အင်တာနက်မှာမြေလှန်ပြီးရှာကြမယ့်လူတွေချည်းပဲကိုး။ ကိုယ်မပြောရသေးခင် အရင်ဦးအောင်ရှာထားပြီးသားလူတွေတောင်ရှိချင်ရှိနေမှာ။ အဖြစ်ကိုပြန်ရစ်ရရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်လောက်ကပေါ့….. အဲ့တုန်းက သူငယ်လေးသာသာရှိသေးတဲ့ ဂျက်စတင်ရယ်ကိုယ်ရယ် Super Bowl Half Time Show(2004) မှာတွဲပြီး Rock Your Body ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ဖျော်ဖြေမိပါတယ်၊ငါးပါးတွေမှောက်ခဲ့ပါရောလား။ အစမ်းလေ့ကျင့်တုန်းကမပါခဲ့ပေမယ့်ပိုပြီးများလူကြိုက်များတဲ့အကွက်လေးများဖြစ်မလားလို့နောက်ဆုံးစင်ပေါ်မတက်ခင်လေးမှာသူငယ်လေးဂျက်စတင်နဲ့ပါဖောမန့်စ်လေးလုပ်ရအောင်လို့ညှိခဲ့မိတာတစ်ခုလေးပါကွယ်။
အဲ့တစ်ခုလေးက ကိုယ့်ကို ဂုဏ်ပုဒ်တွေတစ်သီတစ်တန်းကြီးတိုးပေးလိုက်ပါရောလား။ ဘာတဲ့ အဘိဓာန်မှာ Wardrobe Malfujction လို့ခေါ်တဲ့ ဝေါဟာရအသစ်တစ်လုံးတိုးရတယ်တဲ့။ ဝေါဟာရအသစ်ကလဲ တစ်လုံးတည်းတောင်မဟုတ်ဘူး Nipplegate လို့လဲခေါ်ကြသေးသတဲ့။ ၂၀၀၄/၂၀၀၅ခုနှစ်အတွင်း အင်တာနက်သမိုင်းမှာ အရှာဖွေခံရဆုံးနာမည်၊ အရှာအများဆုံးအဖြစ်အပျက်နဲ့အရှာအများဆုံးဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ဟာ ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ပါရောလား။ ဘယ်လောက်တောင်ရှာကြည့်နေခဲ့ကြသလဲဆို တစ်ရက်အတွင်းအရှာဖွေခံရဆုံးအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ စံချိန်အားလုံးကို ချိုးလိုက်တဲ့ထိပါပဲရှင်။ အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ အင်တာနက်ရှာဖွေမှုသမိုင်းမှာ အရှာဖွေခံရဆုံးရှာဖွေမှုကြီး ဆိုတဲ့ ဂင်းနစ်စံချိန်ကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ဒီလိုရှာဖွေမှုတွေများလွန်းလို့ youtube ကတောင် video sharing website ကိုတီထွင်ဖို့စိတ်ကူးရခဲ့တာ Janet Jackson ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကစတယ်လို့တောင် ပြောယူခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။ ဒါတောင်သေးသေးမွှားမွှားတွေထည့်မပြောတော့ဘူး မောလွန်းလို့။
အပြစ်တွေလား??? တင်လိုက်ကြတာများ မပြောချင်တော့ပါဘူးရှင်။ ရှင်တို့ သူငယ်လေးဂျက်စတင်ကိုတော့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းလုပ်ပြီး ကျယ်မကိုပဲ ဝိုင်းအပြစ်ဖို့ကြတော့တာကိုး….အစားမတော်တစ်လုတ်၊ အသွားမတော်တစ်လှမ်း၊ အလုပ်မတော်တစ်ကွက်ပါတော်။ မှတ်ထားကြပါ အရပ်ကတို့ရေ…..ကျယ်မမှာ black-list ထဲထည့်ခံရ ခွေထုတ်တော့လဲ အဆင်မပြေနဲ့ အဲ့တုန်းကဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာ ဘယ်မေ့နိုင်မှာလဲ။
နောက်ခါများကြရင် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံအောင်ထိန်းသိမ်းကြပါ။ ယောင်လို့များတောင် မရွယ်ခိုင်းကြပါနဲ့နော်။ အဖြစ်အပျက်အစုံကိုသိချင်ရင်တော့ အောက်က video လေးကိုသာကြည့်လိုက်ကြပါတော့လို့…….” “
ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုဆို Janet Jackson ကတော့ခုချိန်မှာ သူ့ရဲ့ State of The World Tour နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပါ။ Justin Timberlake အနေနဲ့လဲ ကျေအေးငြိမ်းချမ်းလိုတာကြောင့် သူ့ရဲ့ သုံးကြိမ်မြောက် Super Bowl တင်ဆက်မှုမှာ Janet ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ Janet Jackson ရဲ့ fan တွေက သူတို့ရဲ့ Icon ကြီးအတွက် twitter မှာ #JanetJacksonAppreciationDay ဆိုတဲ့ hashtag နဲ့ ဝိုင်းအားပေးနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Janet Jackson အနေနဲ့လဲ သူ့ကိုဝိုင်းချစ်ပြီး အားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ တွန်းအားတွေနဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ အောင်မြင်နေမှာပါလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Music Newsjacksonjanetjustinsuper bowl
PREVIOUS POST Previous post: Bruno Mars ရဲ့ 24K Magic World Tour မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေမယ့် Cardi B !!
NEXT POST Next post: ‘Twilight Theme’ လေးနဲ့ Taeyang နဲ့ Min Hyorin တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်